Ahoana ny fisafidianana vahaolana ho an'ny varotra varotra | Martech Zone
Talata, Jolay 15, 2014 Alatsinainy, Novambra 9, 2020 Jenn Lisak Golding
Na dia mety manana ny safidy betsaka indrindra aza ny mpivarotra amin'izao fotoana izao, ny indostria hafa kosa dia miditra amin'ny sehatry ny automatique mba hanamora ny fiainana sy ny asa. Ao amin'ny tontolon'ny fantsona marobe, tsy afaka mitantana ny zava-drehetra isika ary midika koa fa asa fitantanana tsotra izay nitaky ny 20% tamin'ny androntsika.
Ny ohatra iray voalohany amin'ny iray amin'ireo indostria izay manao dingan-dava amin'ny sehatry ny mandeha ho azy dia ao anatin'ny varotra; mazava ho azy, Salesforce.com dia mpilalao lehibe hatry ny ela, fa ny fampiharana hafa, ankoatry ny CRM, dia manjary mazava ary manandrana lasa vahaolana SaaS ho an'ny ekipa mpivarotra. Ny tanjon'ireto vahaolana ireto dia tsy ny fanodinana automatique fotsiny ny asa fitantanan-draharaha, fa natao hanomezana anao vokatra tsara ihany koa Analytics afaka manome izany raharaham-barotra varotra (SBI) ho:
Rehefa nifantoka ny fanantenana.
Ahoana ny fomba nanatanterahana ilay fanantenana.
Inona ny tetika sy cadence tokony hampiasaina hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra.
Ny mpanjifanay sy ny mpanohana anay, Salesvue, dia iray amin'ireo mpisava lalana tamin'ny sehatry ny varotra automatique, ary nanohy nanampy ny mpanjifany izy ireo hanao ny ekipan'ny varotra vokariny. Manomboka amin'ny lahasa fitantanan-draharaha ka hatrany amin'ny fampahatsiahivana, ny rindrambaiko ataon'izy ireo dia manamora ny fifantohan'ny ekipa mpivarotra amin'ny fivarotana fa tsy ny famenoana ny CRM.
Amin'ny maha-iray amin'ireo vahaolana mandeha ho azy amin'ny varotra tany am-boalohany, dia namorona infographic amin'ny Ahoana ny fomba hisafidianana vahaolana ho an'ny varotra mandeha amin'ny varotra, manome lisitr'ireo zavatra dinihina amin'ny antsipiriany rehefa manandrana mitady vahaolana SaaS mety ho an'ny ekipanao.
Mampiasa vahaolana mandeha ho azy amin'ny varotra ve ianao izao? Raha eny dia iza? Mizarà ny eritreritrao na ny zavatra niainanao ao amin'ilay fizarana hevitra etsy ambany. Raha liana hianatra bebe kokoa momba ny Salesvue ianao dia tsindrio eto ambany:
Tsidiho ny Salesvue
Tags: Content Marketingfaharanitan-tsain'ny mpanjifaMarketing Infographicsvarotra mandeha ho azyraharaham-barotra varotraatiny fivarotanaFanamafisana ny varotravarotra infographicvarotra infografikaSBI
Jul 15, 2014 amin'ny 10: 03 AM
Inforgraphic lehibe - Tsy tsapako fa nitombo ny varotra anatiny!